Ciidamada Eriteriya oo la Geeyay Aaga Lagu Muransan Yahay ee Isku Haya Suudaan iyo Itoobiya – Rasaasa News
Jijiga, rasaasa – Mar 24, 2021 – Ciidamada Eriteriya waxay joogaan gudaha dhulka lagu muransan yahay ee xadka u dhexeeya Itoobiya iyo Suudaan, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
In ciidan lagu daablo saddex-xagalka al-Fashqa ayaa timid iyada oo ay sii kordheyso xiisadaha u dhexeeya Itoobiya iyo Suudaan ee ku saabsan gacan ku haynta aagga dhul-beereedka wax-soo-saarka leh.
Colaadda ka taagan xadka u dhexeeya Suudaan iyo Itoobiya ayay xaalad colaadeed ka jirtaa, iyada oo ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo kuwa Itoobiya oo ay la socdaan maleeshiyooyin Amxaaro ah iyo ciidamada Ereteriya la geeyay hareeraha deegaanka Barkhat ee gobolka Fashaga iyada oo ay jiraan iska horimaadyo.
Wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gebremeskel ayaa diiday inuu ka jawaabo su,aal uu waydiiyay wargayska Bloomberg.
Warbixinta ku saabsan howl gelinta ciidanka Eriteriya ayaa timid iyadoo ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu qirtay markii ugu horeysay in ciidamada Eritrea ay taageerayeen ciidamada dowladdiisa isku dhaca ka jira gobolka Tigreega ee Itoobiya. Abiy oo ka jawaabayay su’aalo ay xildhibaannadu weydiiyeen maalintii Talaadada, wuxuu sheegay inuusan doonayn dagaal ay keento xiisada ka dhex aloosan Itoobiya iyo Suudaan.
“Itoobiya dhibaatooyin badan ayaa haysta, diyaarna uma nihin inaan dagaal galno. Uma baahnin dagaal, ”ayuu ku yiri hadallo la turjumay oo si toos looga sii daayay TV-ga.
Ciidamada Itoobiya iyo Suudaan ayaa geeyay xadka hub ay ka mid yihiin taangiyada iyo baytariyada lidka diyaaradaha. Suudaan sidoo kale waxay dhiseysaa wadooyin cusub oo aagga xadka ah si loo hagaajiyo marin u helka inta lagu jiro xilli roobaadka oo bilaaban doona bisha July
Saraakiisha Suudaan ayaa kala hadlay khilaafka Al-Fashqa madaxda Sacuudiga, waxayna toddobaadkan soo dhoweeyeen dalab ka yimid Isutagga Imaaraatka Carabta oo lagu dhexdhexaadinayo caqabadda ka taagan xuduudaha iyo sidoo kale khilaafka u dhexeeya Masar, Suudaan iyo Itoobiya ee ku saabsan biyo-xidheenka Grand Ethiopian Renaissance Dam.
Madaxweynaha Masar Abdel-Fattah El-Sisi ayaa Arbacadii mar labaad ku celiyey baaqiisa oo ku saabsan baahida loo qabo in la raadiyo heshiis sharci oo nidaaminaya buuxinta iyo ka shaqaynta biyo-xidheenka. Wuxuu carabka ku adkeeyay inay lagama maarmaan tahay in laga fogaado talaabooyinka dhinac keli ah ee la doonayo in lagu soo rogo wax qabad dhab ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Masar.
UN-ka ayaa sidoo kale warbixin ku sheegay in ka badan 140,000 oo qof inay ka barakaceen galbeedka Tigray tan iyo markii xoogaga Amxaarada ay qabsadeen aaga bishii November.